Habar Yoonis Jid Ceeba La’ Baannu U Haynaa.- Qalinkii: Ismaaciil Cawad | Hubaal Media
Guriga MAQAAL Habar Yoonis Jid Ceeba La’ Baannu U Haynaa.- Qalinkii: Ismaaciil Cawad
Habar Yoonis Jid Ceeba La’ Baannu U Haynaa.- Qalinkii: Ismaaciil Cawad
Waa ogtihiin oo annigu waxaan ku jiraa ragga arrimaha qabiilka sida qarsoodi la’aanta ah uga hadla, laakiin la soo heli maayo qof xukun aan leeyahay hoos yimi oo aan qabiikiisa ku dulmiyey. Waanan ku faanayaa inaan arrimaha qabiilka si togan oo aan eex iyo hamrasho lahayn uga hadlo.
Wixii ka danbeeyey kulankii odoyaasha dhaqanka Habarjeclo (Ba Xabuusho) iyo odoyaasha dhaqanka ee Habar Awal ku dhexmaray magaalada Burco waxaa soo baxday qaylodhaan odhanaysa reero ayaa xulafoobay, xulafada noocaas ahina Soomaalilaan way duminaysaa. Warkaas baan ereyo ka odhanayaa.
Su’aal: xulufadan laga qayliyey ma isbahaysigii siyaasadeed ee qabiil ku dhisan ee Soomaalilaan ka dhaca kii u horeeyey baa?
Jawaabtu waa Maya ee waa laga horeeyey.
Haddii aanu nahay Habar Xabuusheed kursiga dalka u sareeya waxaa hunguri naga galay 1997 kii, iyadoo oo uu madaxweyne yahay nimaan lagu hungurayn karin meel uu haysto. Waa Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal (AHUN),oo madaxweyne tartamaya ah.
Waxaa shirgudoonka doorashada ahaa Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo Habar Yoonis ah. Waxaa wax lagu dooranayey hab qabiil, waxaa tartamayey laba nin oo Habar Awal ah iyo nin Xabuusheed ah. Habar Yoonis siday u dhan tahay waxay codkii siisay ina Cigaal oo Habar Awal ah. Maalin kumaanu caban, manaanu odhan reeraa wax isku shubtay, waanu ku qanacnay in nalaga adkaaday.
Waxaa dhacday doorashadii 2003 waxaa tartameyey Daahir Rayaale oo madaxweyne ah, kana soo jeeda beesha Gedabuursi iyo Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo habar Xabuusheed ah. Beesha Habar Yoonis sida ay u dhantahay waxay talo ugu codeysay Daahir Rayaale, waana nalaga adkaaday. Arrintaa cidna kagamaanu caban, manaanu odhan reeraa is raacay oo Soomaalilaan baa halis geli doonta, ee waxaanu noqonay shacab madaxweyaha cusubi u taliyo. Waxaa noo dheerayd weedha caanka noqotey ee “Dhab libaax buu ku jiifaa.”
Waxaa soo gashay doorashadii 2010, waxaanu u tagnay Habar Yoonis, jilbahaanu qabsanay, waxaanu ku nidhi ilmaadeerayaal madaxweyne uma sharaxnidin ee codkiina maanta na siiya. Labadii nin ee Habaryoonis u hadlay waxay yidhaahdeen Habar Yoonis waa talo ku nool, wayna tashatay, waxayna ku tashatay iney UDUB (Rayaale) dhisto, haddaa tihiin Habar jeclo reerku wuu badan yahay (H/Y) baadi ka waayi meysaan ee wixii baadi naga noqda eegta.
Markii Warkii usoo wareegay Habarjeclo nin qudha baa u hadlay waa Boodhisleged. Wuxuu yidhi niman yahow Habar Yoons waa noo waranteen, go’aankiiniina waa noo sheegteen, annaguna waanu idinla qaadanay laakiin waxaan idiin sheegayaa sidaa aan maanta inoo go’aamiseen baa inoo xeer ah, nin reerkayaga ahina iga daba hadli maay ayuu yidhi. Sidaas baa lagu kala tegey.
Habaryoonis mid baan leeyahay, HabarJeclona mid baan ku odhanayaa. Habar Yoonis waxaan leeyahay maalintii aa tidhaahdeen baadi naga soo luntay eegta raggii na qaatay ee madaxweynaha naga dhigay baa sharaxan, way noo yimaadeen waxay yidhaahdeen deyntayadii na siiya, annaguna waa yeelaynaa baanu nidhi. Gobi waa tii abaalgudee haddii aanu nidhi haye ma cid baanu waxyeelay, mise burbur Soomaalilaan baanu ka taliney. Gob walaalahayo ah baa tihiin, uma qalantaan baadi naga eegta laakiin xeerkii aa gacantiiina ku qorteen maaha inaa ka danqataan, annagana nagu eeddeysaan. Habarjeclana hal baan idhi laba walaalaheen ah oo ina siman baa sharaxan ee abaalkiina innaga guda walaaltinimadana inoo ilaaliya.
Article horeXuska 33-Guurada Maalinta Shuhadada ee SNM 17/10/1984-kii – 17/10/201-4ka
Article soo socdaMadaxweyne Siilaanyo Oo Kulan Isugu Yeedhay Murashixiinta Saddexda Xisbi Qaran, Xubnaha Komishanka Qaranka Iyo Laamaha Amaanka